Okubhaliweyo olusisiseko Ke kuxhaswa yi-ngqangi yamandulo | Apg29
Okubhaliweyo olusisiseko Ke kuxhaswa yi-ngqangi yamandulo
Ngu Bo Hagstedt, uSihlalo, uAndré Juthe Ph. D. Swedish Funda.
Eli nqaku libonisa imizekelo ecacileyo nendlela yokukhetha kwetekisi entsha esisiseko waya.
→ Download inqaku njengefayile-pdf.
Eli nqaku libonisa imizekelo ecacileyo nendlela yokukhetha kwetekisi entsha esisiseko waya. Le mizekelo elinambini eziqulathwe kweli nqaku Okubalulekileyo kuquka oku:
Okubhaliweyo ezisisiseko Ke, Umbhalo zfunynw, yinkxaso-ngqangi yakudala Alexandria.
Kaloku aphendula amadoda amahlanu, owasinikayo umbhalo omtsha esisiseko, waba Ukwehluleka umbhalo lamaByzantine.
Isibakala sokuba eziliqela ngabo babecinga ukuba iVangeli yokuqala lihanjiswa ngomlomo. Yavele xa isiphene ukosuleleka ngomlomo, nto leyo ke walungisa ibandla. Bamela ukuba itekisi yaseByzantium yincwadi kamva yabefundisi ethe yalungiswa iziphoso ezazilapho ukususela ekuqaleni.
Ukuba ukuba ifayile eyodwa ngqangi kuquka ngqangi yamandulo, inika inkxaso amagama ekunene ukuze banyula wamonayo omnye, kuba babekholelwa ukuba kukho isiphoso ukususela ekuqaleni beCawa ukususela alungiswe. Kodwa le yokusebenza lonto ngokupheleleyo, kuba uNdikhoyo uthi sonke iSibhalo siphefumlelwe nguThixo, kwaye kufuneka agcine ilizwi lakhe.
Aila Annala athi okubhaliweyo endala ezisisiseko 1500, Text ifunyenweyo kusekelwe ngqangi 900-1200 leminyaka. Nangona kunjalo, oku intsomi ongenanceba. Inyaniso kukuba lo Text ifunyenweyo kusekelwe ngqangi abadala, nto leyo eya kuba eli nqaku. Thina kwi Ke bakholelwa ukuba iZibhalo Ezingcwele kunye itekisi esisiseko iye yagcinwa nanamhla yethu ngolwalathiso kaThixo.
Abanye kwexesha eyadlulayo, Aila Annala, umguquleli inqununu nuBibeln, inqaku The World Namhlanje apho wakhuthaza ukuba amaKristu afanele siphikisane iSibhalo. Uthi e Sweden sibe iinguqulelo ezininzi ezintle nangona thina ilizwe elincinane kunye de-ubuKristu kwaye ezi nguqulelo iyavumelana. Aila bazisole ukuba abanye abantu kummangalela iBhayibhile 2000 ngokuzama ukuba atshabalalise isithixo kaKristu. Kwakhona uthi iinguqulelo ezintsha esekelwe kwisicatshulwa esitsha ezisisiseko 1970 badla ukwenza ngcono ngenxa ukuba ngoku ukufikelela ngakumbi imibhalo-ngqangi abadala.
Thina ukusuka Swedish Ke nguye uluvo eyahlukileyo. Asinto ngumphelelisi iinguqulelo ezahlukeneyo ziphikisana iimfundiso ezisisiseko zamaKristu. Asazi siphikisane iZibhalo Ezingcwele, kodwa kwelinye icala, sifuna ukukhusela iSibhalo oyiNgcwele kunye itekisi zalo ezisisiseko, siyakholwa, ngenxa ngolwalathiso kaThixo iye yagcinwa ukusa kwixesha lethu. Ukuba uThixo uya kukugcina ilizwi lakhe ubungqina obucacileyo yakhe yeBhayibhile (Isaya 40: 8 Neh 8:. 8. INdumiso 12: 6-7, 119: 152nd Mateyu 5:18 Luka 16:17 Roma 15:.... 4 . 1 Pet. 1: 23-25). Kwakhona bekuya kuba nzima kakhulu ukuba uthembe iBhayibhile ukuba phambili abanakuxhomekeka umbhalo wayo igcinwe. Sazi njani umzekelo ukuba akukho ukufunyanwa elizayo-ngqangi abadadlana nokuba emfutshane ngaphezu okubhaliweyo Alesandire kwenza isicatshulwa ngoku sikholelwa le lilizwi likaThixo, ayikho ngokwenene apho? Ekugqibeleni, lonke ilizwi likaThixo phantsi.
The Bible in 2000 kunciphisa isithixo kaKristu akukho mgwebo eyingozi, kodwa kuphela inyaniso ngokunyaniseka. Kwanele ukufunda eRoma. 1: 4, apho ngo-2000 iBhayibhile ithi uYesu wamiselwa ukuba unguNyana kaThixo, ukuvuka kwakhe ekufeni. Kodwa uYesu akazange kwaziswa ukuba uNyana kaThixo, ngokuvuka - ke wazalwa unyana kaThixo yaye, unyana kaThixo ubomi bakhe, ukufa kwakhe, nokuvuka kwakhe nokuphola kunye nokungapheli. Ngaphezu koko, uYesu ebizwa ngokuba nguNyana kaThixo kunye iindevu encinane, kwaye xa imini enye baqubude kwedolo bavume ukuba uYesu uyiNkosi, Fil. 2:11, ubhala nene kunye h encinane, xa ebiza uPetros iliwa kunye capital C Mat. 16:18.
Aila uthi FNns itekisi kwincwadi yeZenzo. 9: 6 leyo zafakwa Umbhalo Efunyenweyo. Luchanekile ukuba amagama yeZenzo alandelayo. 9: 5-6 imiyalelo esele ezininzi ngqangi yesiGrike:
Ivesi 5. "Kunzima ukuba ukhaba iimviko nje." Yinyaniso ukuba la magama ezingekhoyo i kuninzi ngqangi yesiGrike kodwa FNns ne-ngqangi yakudala yesiLatini, yesiLatini. La magama Kwakhona yesandla Isikrobisa yaseSiriya kwaye ngqangi yesiGrike, ikhowudi E, no-431, kodwa kwivesi ezine endaweni. Ngaphezu FNns mazwi onke ngqangi yesiGrike yeZenzo. 26:14.
Ivesi 6. "Bobabini bephethwe lungcangcazelo nokuthi nqa; wathi, Nkosi, yintoni ofuna ndikwenzele ntoni na? Wathi uYehova kuye. "La mazwi obunqabileyo kuninzi ngqangi yesiGrike kodwa nje njengamazwi kwindinyana 5 FNns ezininzi imibhalo-ngqangi yakudala yesiLatini, yesiLatini, kwaye kwezinye iinguqulelo yamandulo waseSiriya kunye Coptic. Ukongeza FNns nabo la mazwi onke ngqangi yesiGrike njengamazwi v5 kwenye indawo kwi incwadi yeZenzo (IZe. 22:10).
Isiqinisekiso ibalulekileyo amazwi ivesi 5 ne-6 lolokwenene uqinisekiswe YeZibhalo Ezingcwele, yi itekisi efanayo ubonakala nakwezinye iindawo ezimbini kwincwadi yeZenzo, yeZenzo. 22:10, no 26:14.
Ke ukuba ukufumana imibhalo-ngqangi abadala, kuyinyaniso ukuba namhlanje lufikelela ngqangi omdala ayenalo 1500. Aila athi okubhaliweyo endala ezisisiseko 1500, Text ifunyenweyo kusekelwe ngqangi 900-1200 leminyaka. Nangona kunjalo, oku intsomi ongenanceba. Inyaniso kukuba lo Text ifunyenweyo kusekelwe ngqangi abadala. Aila wabuza kumnombo wakhe wokugqibela le mibhalo. Ngoku siza kuchaza ukuba ziyintoni na ezi zinto. Kodwa xa sijonga ukuba ngqangi yamandulo kwisiGrike, leyo ukusuka 350 ukuya kuma-400, ngoko isenokuba ezahlukeneyo kwezo ndinyana zeBhayibhile kwenye. Kodwa sijonga ngqangi ukususela 500 de ekuqaleni 1500 njengoko ngqangi Byzantine zoninzi egqibeleleyo yaye bayavumelana kakhulu.
Metzger uyavuma "I History of NT Umbhalo Ukugxekwa" yetekisi yaseByzantium uye walondoloza läsvariation ezinokuthi ezabhalwa ngenkulungwane yesibini okanye yesithathu emveni ukufunyanwa-ngqangi ngqangi, p45, p46 kunye p66.
uqikelelo bulumko kanye nemibono kuchaphazela indlela yeesampulu
Ngaphambi sijonga izicatshulwa ezithile, okokuqala sifuna ukuthi ukuba ngaphambili baye babonisa kumanqaku eziliqela, njalo njalo ngqangi baseByzantium. Le mibhalo babe uzinzo olukhulu kwaye - njengokuba siyibona - ngokusebenzisa ngolwalathiso kaThixo wayilondoloza okubhaliweyo basic yokuqala. UThixo wathembisa ukuba kulondolozwe iLizwi laKhe, kwaye ukuba akukho Text sekholbheki amazwi kaThixo walilondoloza, umbhalo ukuba Aila bakholelwa ukuba uMoya oyiNgcwele uye wayilondoloza ukutyhubela iinkulungwane? Kucacile ukuba kuyo yonke imbali baye abantu, abafana Origen, kaEusebius, Westcott kunye kaHort emane ukhethe ifundeke apho ubuthixo kaYesu ayicacanga ngenxa yokuba abazange bakholwe ukuba uYesu yohlobo olufanayo njengoko uYise. It ngokwenene kakhulu kulindeleke,
indlela yokukhetha antibysantisk uyakhetha
Ngoku uya kuyinika umzekelo wendlela inkqubo yokhetho uyakhetha loo ekuvunyelwene ngayo kule mihla. Ukuze siqonde indlela kukhethwe okubhaliweyo waya, nathi sifanele sazi into malunga amadoda amahlanu kwi 1970 wasinika okubhaliweyo ezisisiseko ezitsha kunye nemodeli yokusebenza abayisebenzisileyo. Luhlobo olunjani ngqangi bakhetha ezi abahleli abahlanu? Carlo Martini of the Catholic Church thaca lo mbhalo-ngqangi Vaticanus, ngubani na ivela eAlesandriya. UBruce Metzger akazange asebenzise itekisi yaseByzantium njengoko ingqalelo ukuba sonakale. Allen Wikgren wayefuna ukusebenzisa izinto ezindala zokufundisa ukuzama ukubuyisela umbhalo wokuqala. Oko kuthetha akazange afune ukuba asebenzise itekisi ezikhoyo ezifumaneka ngqangi aseByzantium Text zfunynw, kodwa yena wayefuna ukubuyisela okubhaliweyo othile okuthiwa abadala ngakumbi ifomu yoqobo yesandla ababevela Alexandria. Matthew Black wayevakalelwa ukuba uhlobo lwetekisi yaseByzantium asinguye yokuqala kodwa kamva edityanisiweyo kunye nabanye Atadi umbhalo yobufundisi. Ekugqibeleni, thina uKurt Aland njengoko bobabini banoxanduva kumbhalo wesiGrike, NestleAland 1979 (Abantu zeBhayibhile kunye nuBibelns itekisi esisiseko), kwaye Text United Bible Society Greek, 1975 (Bible 2000 itekisi esisiseko). Aland wayevakalelwa ukuba nako ukwenza ukusebenzisa uhlobo lwetekisi yaseByzantium, kuba yintw ukuseka umbhalo wokuqala. Siyabona ukuba zonke ezintlanu bavuma ukuba bangazama ukuba ufake i ngakumbi itekisi yoqobo nge ngqangi ubudala Alexandria, waza wabona uhlobo lwetekisi yaseByzantium ukuba kamva zadityaniswa kunye nabanye Atadi umbhalo yobufundisi. Ngaphezu koko, njengoko zombini i-Black and Metzger ukuba ezilungileyo original banda yokuqala ngomlomo phambi kokuba usayine emazantsi yaye ngaloo ndlela yavuka engalunganga. (5. Black, p. 633. 6. Metzger, p. 86) impazamo yalungiswa ukususela ibandla kwi-ngqangi yaseByzantium, phantsi iingcamango la madoda ngayo.
Metzger uthi ngokucacileyo imodeli yabo abayisebenzisayo kwenye yeencwadi zakhe: "Xa yesandla ye nguBawo eCawa kwahlukile phezu indinyana yeBhayibhile, kudla ngokuba kuhle ukuyamkela bahlukile kwisicatshulwa zonqulo kamva (baseByzantium okanye iVulgate)". (1. Metzger, page 87) wafumana, ekukhetheni uphindo looyise, kodwa siya kubona ngokucacileyo ukuba sisebenzisana nalo isiseko ukhetho wetekisi iBhayibhile, kuba isicatshulwa.
ngqangi ebalulekileyo yamandulo
It FNns eziliqela ngqangi yamandulo, ebhalwe ngoonobumba abakhulu, nto leyo ibaluleke kakhulu kwezi abahleli ngenxa yokuba bonke endala kakhulu. Amaninzi, imibhalo-ngqangi ngoonobumba abadala kunabo oonobumba abakhulu nabancinci. Kwingxelo yethu, siye eziqokelelwe data ikakhulu ukusuka kwincwadi JA Moorman, ngqangi Early, Ootata Church, kwaye abagunyazisiweyo Version, (4. Moorman) kunye nencwadi uBruce M. Metzger kaThixo, A Umbhalo Commentary on the Greek New Testament, (2. Metzger) apha uluhlu lwe ezinye ngqangi ebhalwe ngoonobumba abakhulu:
Code Sinaiticus (Alef) ukusuka yee-300. Iqulethe yonke NT.
Code Alexandrinus (A) ngu 400 kaThixo. Iqulethe phantse yonke NT.
Code Vaticanus (B) 300 kaThixo. Iqulethe phantse yonke NT ngaphandle iincwadi zokugqibela ezine iTestamente Entsha.
Code Ephraemi rescriptus (C) ngama-400 ka-. Iphethe NT.
Code Bezae Cantabrigiensis (D) ngama-400 ka-. Liqulathe zeVangeli yeZenzo.
Code Claromontanus (D) ngu 500 kaThixo. Ngaba iincwadi zikaPawulos ngesiGrike nangesiRoma.
Code Basilensis (E) ukusuka 700 leyo. Liqulathe zeVangeli.
Code Washingtonianus (W) ngama-400 ka-. Liqulathe zeVangeli.
Ngaphezu FNns imvuthuluka evela kwinani ngqangi ukuba abadala kwaye sibizwa yesandla ngqangi. Ngoku siza kuqwalasela izicatshulwa zeBhayibhile ezithile ukubona indlela yokusebenza, la madoda mahlanu isicelo.
Yoh. 7: 8 wayengekho kwezinye ngqangi
In Yoh. 7: yesibhozo UYesu uthi kuvesi 8 ukuba angalandeli ukuya emthendelekweni eYerusalem kwivesi 10 uthi, bakuba benyukile abazalwana bakhe, wenyuka naye, waya emthendelekweni, wandula ke naye apho. ngqangi abaninzi ilizwi okwangoku. Ilizwi ibaluleke nangoku kuba xa ayinalo, uYesu wathetha na inyaniso. Njengoko igama kodwa FNns-ngqangi yokuqala ezifana ngesandla somkhanzi 66 no-75 kunye nombhalo abagxeki favorite Vatican, kufuneka ukhethile läsarten. Apha uyakwazi ukubona isishwankathelo-ngqangi:
Sibona kuqulunqo inkxaso nokuba abe kakhulu phakathi-ngqangi kuquka ngqangi ngqangi P66 kunye P75 evela 200 leyo. Ngokunxulumene abahleli ezintlanu wasinika okubhaliweyo esitsha ezisisiseko ngowe-1975, emva koko wanika Metzger wapapasha incwadi apho wayehlanganisa izimvo kwizigqibo Benza kwi sicatshulwa nganye yeBhayibhile. Apha abhale izimvo ilandelayo:
"Umbhalo kodwa yaqukwa kusasa ukunciphisa ukungangqinelani phakathi ivesi 8 10." (2. Metzger, iphe. 185)
Oku ingxelo yenzululwazi, kodwa nje ingcamango ngaphandle isiqinisekiso. Kutheni ukuyichaza le abahleli yeBhayibhile ukuba useza ke ulahlekile ukususela ekuqaleni? Kakuhle ngenxa yokuba umbhalo yokuqala iimpazamo, ngokutsho kwabo, ngokuyinxenye ngenxa ngomlomo, babefuna ukubuyisela okubhaliweyo shape yayo yoqobo kwanokuba oko engalunganga. Zombini okubhaliweyo aseByzantium yesiLatini umbhalo kamva yabefundisi ngokwezo abahleli. Kodwa kutheni samkele ukuba kwanokuba apho ukususela ekuqaleni xa ukubhala wabo abawuthandayo, eVatican, kwaye kananjalo ezimbini ngqangi ngqangi babe ilizwi kodwa ukuba yinyaniso? Kuba iitekisi zabo ehlaziyiweyo yahlukile kumbhalo zonqulo kamva njengoko kwiVulgate. Impendulo kukuba ezi abahleli ezintlanu zomsebenzi singangumzekelo bonke Kuthiwa hayi wokugqibela konke ukulandela Vatican, kodwa ngaphezu kwabo bonke ukuba ulandele "umbhalo yonqulo" ngokohlobo ngqangi baseByzantium. Hayi kulandela isicatshulwa yaseByzantium ukuba ibandla lamaKristu ngokuthembeka trad kwakhokelela kangangeenkulungwane ngaphezu elinesihlanu kubaluleke ngaphezu kwayo nantoni na. Kwakubaluleke ngaphezu izinto itekisi xa iyonke kwaye oko kubaluleke kakhulu ukubhala zabo abazithandayo Vatican wathetha nxamnye nabo. Yaba yoku antibysantiska yaba ngumsebenzi omninzi ezikhethekileyo kwezi abahleli ezintlanu umbhalo yokhetho. Kwakubaluleke ngaphezu izinto itekisi xa iyonke kwaye oko kubaluleke kakhulu ukubhala zabo abazithandayo Vatican wathetha nxamnye nabo. Yaba yoku antibysantiska yaba ngumsebenzi omninzi ezikhethekileyo kwezi abahleli ezintlanu umbhalo yokhetho. Kwakubaluleke ngaphezu izinto itekisi xa iyonke kwaye oko kubaluleke kakhulu ukubhala zabo abazithandayo Vatican wathetha nxamnye nabo. Yaba yoku antibysantiska yaba ngumsebenzi omninzi ezikhethekileyo kwezi abahleli ezintlanu umbhalo yokhetho.
Mark. 1: 2 okanye abaprofeti umprofeti uIsaya
KuMarko. 1: 2, umbuzo kukuba nokuba kufuneka ibe 'umprofeti uIsaya,' okanye 'ngabaprofeti'. Kukho ucaphulo ezimbini, eyokuqala kuMalaki kunye nezinye uvela uIsaya. Ngoko ke, ukuba luchanekile ukubhala abaprofeti. Nantsi isishwankathelo-ngqangi:
Metzger unika izimvo olandelayo zokuba kutheni bekhethe umprofeti uIsaya:
"Ngoko ke kulula ukubona isizathu sokuba abo bakhuphela oko kutshintshile amazwi" umprofeti uIsaya "(yokufundwa ukuba FNns kwi amangqina zokuqala uhlobo lombhalo Alesandire kwaye Western) okubekwe intshayelelo ngaphezulu" abaprofeti. "(2 Metzger, page . 62)
Ngokutsho Metzger, oko ke kungcono ukukhetha "umprofeti uIsaya," nokuba FNns isininzi ngqangi oonobumba abakhulu kunye nasezantsi axhasayo abaprofeti njengoko watshoyo uIsaya umprofeti yahlukile kwisicatshulwa osukela kamva (okt Byzantine). Ngoko ke yayingekho indlela yokusebenza lwezenzululwazi amlandela, kodwa intelekelelo kuphela, nto leyo uthatha ukuba okubhaliweyo yezibhalo eziqulethwe iimpazamo ukususela ekuqaleni. Qaphela ukuba wesandla Alef (Sinaiticus), equlethe iimpazamo ezininzi, impazamo enye e-Mat. 13:35, apho ke umprofeti uIsaya, kodwa sicatshulwa luvela kwiNdumiso 78: 2nd Le mpazamo ke asivunywanga xa kwakukho eminye imibhalo-ngqangi yesiGrike lulahlekiso elifanayo.
Mark 9:42 Lowo ukholwayo kum
Mark 9:42 Ke othe wakhubekisa noko amnye waba bancinane bakholwayo kum, nali ilizwi lam lishiyiwe kwezinye ngqangi. Apha kuqhotyoshelwe isishwankathelo impahla ngqangi:
Sijonga isishwankathelo inkxaso yamagama 'kum' unamandla kakhulu phakathi ngqangi yamandulo kuquka eVatican kunye FNns kunye zombini iVulgate kwaye uninzi ngqangi kunye oonobumba abakhulu abakhulu nabancinci. Kodwa Metzger babhala izimvo zabo ukuba FNns Kungenzeka ukuba la mazwi zibandakanyiwe ukusuka ukufana kunokuba kuMateyu 18: 6 Ngenxa yesi sizathu, baba madolw 'anzima ukuya kula magama uwafake kwindawo yegama. Kodwa sizathu ukuba ngaba ngokwenene imodeli yabo yokusebenza antibysantiska: "Xa FNns mahluko, oko ezikhuselekileyo khetha okubhaliweyo yahlukile kwitekisi zonqulo kamva, ie umbhalo Byzantine. "(1. Metzger, p. 87)
Mat. 5.22 kabi
Ke mna ndithi kuni, Wonke umntu ofumana amqumbele umzalwana wakhe, kungekho sizathu sivakalayo, uba noxanduva umgwebo. Nazi amagama kungekho sizathu sivakalayo ezishiyiweyo ngqangi yesiGrike. NgesiGrike, kuba ligama nje. Nantsi isishwankathelo:
It FNns inkxaso emandla phakathi ngqangi abadala yaye icaphula Abaseki beCawa kwenkulungwane yesibini ukubheka phambili kuba kungekho sizathu sivakalayo lokwenene kodwa Metzger ubhala oku izimvo zakhe;
"Xa ufunda" kungekho sizathu sibambekayo "yandile ukususela ngenkulungwane yesibini ukuya phambili, kusenokwenzeka ngakumbi ukuba ilizwi longeziwe ngulo mntu zikhutshelwa isicatshulwa ukuthambisa phambi isibhalo elihlabayo, ngaphezu lizwi zishiyelelwe ngempazamo njengoko engeyomfuneko." (P . 11, Metzger 2)
Metzger kunye nezinye abahleli aya kubona kuphela izizathu zokuba ilizwi kufuneka ukuba longeziwe, kodwa bengafuni uluvo lokuba lo mntu ukhutshelwe aphoswe igama. Yini na ukuba wenze le ukhetho? Xa uyazi indlela yabo yokusebenza antibysantiska ukuze uqonde ukuba kutheni. Bakhetha umbhalo kuphambuka "umbhalo osukela kamva (okt Byzantine). Esinye isizathu sokuba esusiwe ngaphandle kwesizathu esivakalayo ukuba uyise ibandla uOrigen ngqangi le, kodwa kucingelwa kungekho sizathu elungileyo kongezelelwa. (3. Burgon, iphe. 359-360)
Luka. 2:33 Joseph noyise
Ezinye yesandla "uYosefu nonina bakhe, bamangaliswa ..." ngoxa abanye yesandla "bamangaliswa uyise nonina ...". Ukuba kukho ukuba uYosefu noyise kubaluleke kakhulu ngenxa yokuzalwa virgin. Nazi isishwankathelo out:
Sibona isishwankathelo ukuba uninzi ngqangi yesiGrike oonobumba abakhulu kunye nasezantsi nokubonelela ngenkxaso ukuba uYosefu, kananjalo uninzi-ngqangi yakudala yesiLatini. Xa ukuhlanganiswa uTatian iincwadi zeVangeli ezine njengoko wenza malunga ne-170 leminyaka, utsho Josef. Kodwa uCyril imibhalo zaseYerusalem, usebenza 300 yee, utsho uyise.
Metzger uthi (oko kukuthi, abahleli ezintlanu) bakholelwa ukuba iCawa wayilungisa impazamo ukukhusela ekuzalweni virgin. (2 Metzger, iphe. 111-112) Ku FNns ngqangi yamandulo apho bobabini ukubonelela ngenkxaso uYosefu kunye noyise. Awunako ukungqina nantoni na, kodwa kufuneka ukhethe njengenye yeenketho. Metzger kunye nezinye abahleli bakhetha ngaphandle ubungqina kayise kunye ukugwetyelwa apho isiphoso ukususela ekuqaleni waza walungisa iBandla ulahlekiso. Kodwa "impazamo" kwakukho kwasekuqalekeni, ngoko, kukho intelekelelo kusekelwe kwingqikelelo bokuba ukuba iimpazamo ngokuzenzekelayo kufuneka ukuba kwenzeke usulelo ngomlomo. Ukongezelela, oko ngakumbi inkqubo intelekelelo bokuba ukuba tshintsho lwenzeka ngomlomo kuphela. Baqhubekeka ukulandela umzekelo wabo abasebenza antibysantiska, ukukhetha kwisicatshulwa kuphambuka "umbhalo kamva neecawa", ie umbhalo Byzantine.
Mat. 6: 1 Gift okanye elungileyo imisebenzi
Nangona inkxaso akukho namandla sipho phakathi-ngqangi ukuze FNns-ngqangi embalwa yamandulo ezinika inkxaso yawo. Ngaphezu FNns isipho phakathi uTatian kunye uOrigen imibhalo. UTatian wawusebenza ngasekupheleni 100 kunye Origen ebutsheni 200 leyo. Akudingeki ukuba abe bagxeki bombhalo abadumileyo ukuze baqonde ukuba läsvarianten "Balumkeleni ke ukwenza imisebenzi emihle" likhwelo engalunganga yaye kuchasene enye itekisi yeBhayibhile. Njengoko zombini zeenketho ingalandwa emva kwexesha lamaKristu okuqala, ukhetho kufuneka zendalo ukuqaphela isipho zokwenene njengoko Itekisi kufuneka ibe ngokuvisisana nezinye iivesi zeBhayibhile. YiNkosi ngokwayo lowo iyaphuma zonke iZibhalo. Kodwa ke ngelishwa khetha ezi abahleli ngaphambili lobuxoki ngoko kulungileyo. Eziliqela abahleli bavakalelwa kukuba kukho iimpazamo kwisicatshulwa ngenxa ngomlomo beCawa ukususela alungiswe. (5. Black, p. 633. 6. Metzger, p. 86) Kodwa ilizwi likaThixo uwelile phantsi ngomlomo ngabantu bubuxoki into ukulahlwa iNkosi ngokwayo xa esithi "sonke iSibhalo siphefumlelwe nguThixo." (2 Tim. 3:16)
Mark. 10:24 ithemba ngobutyebi
An ubuninzi-ngqangi yamandulo yesiGrike nesiLatini ukunika inkxaso amagama ashiyiweyo-ngqangi ezimbini Vaticanus kunye Sinaiticus. Metzger unika izimvo kulandelayo: obangelwa mazwi kaYesu yathamba yi kwintshayelelo omnye kvalifkation ukuphelisa ububanzi bayo, bayizisa kufutshane umxholo wesicatshulwa. (2 Metzger, p. 90) Akuzange umbandela ngokubanzi ngqangi ukuba ugqibe ukhetho lwabo ngaphandle guess ukuba engqinelana imodeli antibysantiska zabo angamanga ukusebenza.
Luka. 9:35 omthandayo okanye ekhethiweyo
Le nkcazelo ngqangi lulonke inika inkxaso kuNyana oyintanda. izimvo Metzger likaThixo:
Ekuqaleni oku kuLuka wema ngokuqinisekileyo Okhethiweyo, leyo eyenzeka apha kuphela kwiTestamente Entsha. Le khetho yesibini, equka amazwi afanayo ngakumbi, kungenxa nokubhala kunye uNyana FL ätning oyintanda. (2. Metzger, iphe. 124)
Mfråga nathi: Ukususela oko uYesu olukhethiweyo? na omnye kuphela elinye yokuqala sele ukhethiwe, simele uNyana zikhethwe njani? Thina iindlela ezimbini phantse endala ukukhetha kuzo. Metzger into ethile ngokupheleleyo ukuba ekuqaleni iye yaba okhethiweyo. Ukuba uyakholwa ukuba iSibhalo oyiNgcwele, siphefumlelwe nguThixo, kodwa umbhalo sele udlule ngomlomo kunye ukungafezeki kwabantu, ngoko FNns iziphoso ezininzi ezifuna ukulungiswa. Ngoko kuya kuba kusengqiqweni ukuba sithi Personne wathi: "IBhayibhile ukususela ekuqaleni kwaye kulo lonke umsebenzi womntu" (8 Swedish Bible Society Annual) Personne wayengomnye amadoda amathathu owasinikayo 1917 iBhayibhile ecaweni. Ukuba uyakholwa ukuba Personne, iBhayibhile umsebenzi womntu ngoko ungakhetha Okhethiweyo. Kodwa ukuba ukholelwa ukuba isibhalo Oyingcwele nguThixo-umphefumlo kwaye zilondolozwe, uze ukhethe uNyana wam oyintanda.
Yoh. 6:47 Lowo ukholwayo kum
Le nkcazelo ngqangi ngokubanzi inika inkxaso yalo amazwi ngam, nangona zimbalwa imibhalo-ngqangi yamandulo yesiGrike Ungashiya la mazwi. UTatian wenza Ukuqulunqwa zeVangeli ezine malunga neminyaka 170, apho waba nam. Metzger unika izimvo kulandelayo:
Ukongeza kwam ezemvelo engaphephekiyo. Bamangaliswa kukuba kangako abaninzi abakhupheli wayichasa isilingo. Ukuba amazwi ekuqaleni ubekho kwitekisi, ngoko akukho lokuchaza ezilungileyo zokuba kutheni la mazwi lishiyiwe. (2. Metzger, iphe. 183)
It FNns na ngqangi emininzi walisusa le mpazamo. Le nkcazelo ngqangi ngokubanzi unika iindlela ezimbini nathi. Akukho namnye unako ukubonisa ukuba la mazwi ukususela ekuqaleni okanye alikho. Abahleli ezintlanu kuqhubeka njengoko umfuziselo esebenza antibysantinska, ukukhetha kwisicatshulwa kuphambuka "umbhalo kamva yabefundisi" ngezizathu ukuba bangabona kuphela isizathu elinye kunokwenzeka, okt ukuba abakhupheli umbhalo alungiswe bakwenzelelele apha. Bathi abantu bengafuni ingcamango kunokuba kucacile ukuba umntu ukopishe entweni la magama mabini ngabom aze ke idluliselwe oku impazamo kwabanye iikopi zakho. Ukuba amagama zilahlekile ngoko uthi nalowo ukholwayo unobomi obungunaphakade; ke ngoko ayinalo inyaniso ebalulekileyo ukuba simele sikholelwe kuYesu ukuze babe nobomi obungunaphakade.
1 Kor. 15:47 Nkosi evela ezulwini
Ke zooyise zebandla ngolu hlobo lulandelayo zooyise zebandla neNkosi kwiincwadi zakhe: Tetullianus, nguHippolytus kunye Victorinus of Pettau evela 200 kunye Basil Enkulu 300 ngayo. Abaseki zilandelayo azinayo iNkosi kwiincwadi zakhe: uCyprian evela-200, yaye Hilary of Poitiers kunye St. Athanasius ukusuka yee-300. Kufuneka ukhethe ukuba zeziphi? It FNns inkxaso kwangethuba kuzo zombini iinketho, bobabini luphume kooyihlo libandla ngqangi yamandulo yesiGrike. Enye incwadi yonqulo, okt ngqangi Byzantine abe iNkosi kunye namanye okubhaliweyo yonqulo, okt ngqangi yesiLatini abanalo iNkosi. Metzger uthi ngokhetho zabo ashiye uYehova. "Ukuba igama (leNkosi) ekuqaleni phaya, ngoko FNns akukho sizathu sokuba kufuneka ukuba ayishiywanga ngaphandle." (2 Metzger, p. 501-502) Kwakhona kucaca ukuba akufuni kuba kusenokuba kukho iimpazamo wethu, ukuba umntu ukopishe balisebenzise elo lizwi. Esinye isizathu kusenokwenzeka ukuba Eusebius, lowo wakhupha iiBhayibhile * kuKhesare uConstantine. UEusebius wayengakholelwa ukuba uYesu nguThixo. Ekubeni apho sele iyantlukwano phakathi ngqangi ezahlukeneyo, njengoko FNns kwakhona ukuba kungenzeka ukuba yena wakhetha ngqangi ababenaye iyavumelana yeenkolelo zakhe. It FNns izazinzulu itekisi ucinga imibhalo-ngqangi emibini ubudala Alef (Sinaiticus) kunye B (Vatican) kwezi iiBhayibhile uMlawuli uConstantine ngokomyalelo uEusebius. (7 Skeat, iphe. 21-22) Ekubeni apho sele iyantlukwano phakathi ngqangi ezahlukeneyo, njengoko FNns kwakhona ukuba kungenzeka ukuba yena wakhetha ngqangi ababenaye iyavumelana yeenkolelo zakhe. It FNns izazinzulu itekisi ucinga imibhalo-ngqangi emibini ubudala Alef (Sinaiticus) kunye B (Vatican) kwezi iiBhayibhile uMlawuli uConstantine ngokomyalelo uEusebius. (7 Skeat, iphe. 21-22) Ekubeni apho sele iyantlukwano phakathi ngqangi ezahlukeneyo, njengoko FNns kwakhona ukuba kungenzeka ukuba yena wakhetha ngqangi ababenaye iyavumelana yeenkolelo zakhe. It FNns izazinzulu itekisi ucinga imibhalo-ngqangi emibini ubudala Alef (Sinaiticus) kunye B (Vatican) kwezi iiBhayibhile uMlawuli uConstantine ngokomyalelo uEusebius. (7 Skeat, iphe. 21-22)
1 Tim. 3:16 UThixo wabonakalaliswa esenyameni
Apha lo mbuzo ukuba kuya kubakho nayiphi na). Yokuqinisekisa kakhulu ukuba uYesu nguThixo, Thixo, okanye (ngokoqobo:. Wabonakalaliswa esenyameni bucala amahlelo ezininzi, ezifana amaNgqina kaYehova, bekuya kuba nzima ukuba uwine abaxhasi le nyaniso ukuba uYesu wayenguThixo ebonakalaliswe esenyameni ababesele angaphazanyiswa . oobawo eziliqela ibandla lokuqala kukuba kwimibhalo yakhe, kodwa uyise ibandla uGregory waseNyssa, osebenza phezu yee-300, uThixo kwiincwadi zabo. Ngokutsho Metzger, babecinga ukuba nokulungiswa ilizwi, ekhaliphileyo umshicileli kusenokwenzeka ukuba iye abhalwe engalunganga and watshintsha ngayo Thixo, omnye khetho ukuba Metzger kunye nabanye abahleli zivulekile ukuba wonke umshicileli elungisiweyo kuThixo ukuba 'ukunika uvakalelo enkulu engqongqo. "Metzger icaphula kuquka Origen inkxaso ukuba oko, kodwa siyazi ukuba Origen bebengakholwa imfundiso kaBathathu Emnye. (2. Metzger, p. 573-574) Kwabakho idabi unkulunkulu kwi-300 kwaye akukho kude iyintsomi ukucinga ukuba kukho bezimpi ufuna ukususa uThixo evela kwisicatshulwa.
Abahleli ezintlanu kwetekisi entsha esisiseko noluvo lokuba eli candelo yonke enkulu lombhalo yeVangeli kaMarko yeyona kwisi. Kwenziwe iinzame ukususa zonke ezi ndinyana elinambini ukusuka eBhayibhileni, kodwa wakhetha abafundi abaninzi beBhayibhile ukuba athenge le nguqulelo. Ngoko ke, musa asinabuganga iinguqulelo zale mihla ukususa ezi ndinyana elinambini, kodwa ukuchwetheza ukuba leyo isandiso asisiso yokuqala iVangeli, nobhaliweyo, ngokuba. Umzekelo. 1917, Bible 2000 King James ne nuBibeln. Ubungqina bokuba ezi ndinyana ngokwenene unamandla kakhulu. It FNns 620 ngqangi yesiGrike eziqulathe uMarko, ngowama-618 kwezi FNns ezi ndinyana abalishumi elinababini kunye naye. Kuyinto kuphela ngqangi ezimbini Alef (Sinaiticus) kunye B (Vatinanus) ukuba zilahlekile. -Ngqangi yokuqala ukususela ngexesha elinye, A, ube nayo yonke ndinyana elinambini. Yonke imibhalo-ngqangi yakudala yesiLatini kufuneka ndinyana ngaphandle K, ene-ekugqibeleni elifutshane. zokuqala zecawa ukucaphula ezi ndinyana elinambini, ukususela Justin Martyr phose 150 CE .. phambili kunye Irenaeus ucaphula lo nyaka 180 yonke ngevesi Mark. 16:19. Indlela iivesi kongezelelwa ukuba khona kwiminyaka engama-200 ngaphambi kokuba Sinaiticus Vaticanus ebhalwe? Ukongeza, zombini ezi ngqangi, Alef and B uyabashiya ndinyana, eshiya indawo enkulu engenanto, njengoko umqondiso wokuba ufakele iBhayibhile. Mhlawumbe wayenethemba fnna isicatshulwa ulahlekile kwaye ubhale khona koko. Abahlalutyi Text athi ezi ndinyana elinambini yokugqibela abe indlela eyahlukileyo kuba amagama amabini boqobo ezingekhoyo, emva / emva kwangoko, kodwa umphandi itekisi Burgon iye uphando lo mba kwaye wafumanisa ukuba la mazwi obunqabileyo kwezinye izahluko eziliqela Mark. Bathi ukuba Eusebius kunye Jerome ayinazo ezi ndinyana kuninzi wemibhalo yakhe. Kodwa lokungahambisani kakhulu, kuba kungenjalo bexabana namagqwetha kwetekisi entsha ezisisiseko ukuba akukho inani ngqangi ezibalulekileyo. Kodwa kulo mzekelo, inani igalelo ngequbuliso. It FNns namnye iingxoxo babo babathabathe babe Critical Review. Lixabisekile Ngumbono omhle iyintsomi ukuba umntu afumane ukongeza iivesi elinambini, xa usazi ukuba nemiphumela emibi kakhulu ukuba ukudibanisa okanye ukuthabatha.
Asinto umbandela ngqangi iyonke okanye iikowuteshini ooyise zecawa wenza ukuba Metzger kunye nezinye abahleli ingqalelo ezi ndinyana wongezelela kodwa kunokuba imodeli yabo abayisebenzisayo sapho lwaluquka imithetho ezimbini:
Xa B (Vatican) kunye Alef (Sinaiticus) ekuvunyelenwe, kodwa yohlukile neminye imibhalo-ngqangi silandela aba babini.
Xa FNns umahluko ngoko kungcono khetha okubhaliweyo yahlukile kwitekisi zonqulo kamva, ie yesandla Byzantine.
Ngoku Siye batyhubela zicatshulwa elinambini ukubonisa indlela ukhetho wetekisi itekisi entsha esisiseko waya. Ezinye zezi zicatshulwa ezingabo ephikisanayo kunye nabanye ngokwemigaqo yenkxaso uYesu ngokwaselukholweni. Inkxaso-ngqangi ezahlukahlukeneyo kunokuba ezahlukeneyo ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Maxa wambi inkxaso iphakathi-ngqangi womelele kwaye ngamanye amaxesha buthathaka. Kodwa rhoqo itekisi yaseByzantium / Kufunyenwe inkxaso Text ukusuka kwenye okanye ngaphezulu kakhulu imibhalo-ngqangi yamandulo yesiGrike. Izazinzulu Text bathi namhlanje ukufikelela ngqangi emidala kwaye ngaphezu ayenalo 1500, kodwa B (Vatican) wayesele esaziwa kwi 1500 kunye Alef (Sinaiticus) ngenene akukho ngesandla elungileyo. Kuyinyani ukuba iimpazamo Ukuloba i FNns ezininzi lombhalo wesandla. Loo ngesandla embi kufuneka abe khona okuphembelela kokuba kunikwe itekisi entsha yesiGrike. Nangona ukufumaneka yesandla ngcono namhlanje kunokuba kwi 1500, kuba lo mbuzo ubalulekileyo: Ngoobani kufuneka enze ukhetho? Abo bangamaKristu yaye bakholelwa ukuba iSibhalo siphefumlelwe nguThixo kwaye liyalondolozwa ngolwalathiso weNkosi ngexesha lethu yokwenza ukhetho lwesicatshulwa. Kodwa abo bakholelwa ukuba iSibhalo siphefumlelwe, kwaye musa ukuba iNkosi walondoloza isicatshulwa, benza olunye ukhetho. Kuba bekholelwa ekudluliseni ngomlomo, ukuthini ukuba ikhuselekileyo xa FNns neeyantlukwano kwisicatshulwa, khetha umbhalo wahlukile ukusuka kwisicatshulwa kamva neecawa ie Byzantine. Kolu phononongo, sinokugqiba ukuba xa lukhetho phakathi ngqangi aseByzantium Vulgate ngoko bakhetha ukuba ziphambuke kwisicatshulwa lamaByzantine. Babefuna ngaphezu kwabo bonke ukulandela zabo abazithandayo ngqangi B (Vaticanus), kodwa kwakhona ukubona amaxesha xa bakhetha lokuba anduluke kweli ngqangi ngenxa yokuba iyavumelana ngqangi aseByzantium kwi ukhetho phakathi ilandelayo B (Vatican) okanye ukuphambukiswa kwisicatshulwa Byzantine, njengoko bakhetha ukuba ziphambuke kwesona kwisicatshulwa lamaByzantine. Le antibysantiska ukusebenza eziyimizekelo ayaziwa kakuhle kunjalo, umntu uyakwazi ukufunda ngazo kwenye yeencwadi Metzger kaThixo. (1. Metzger, p. 87) Oku imodeli umsebenzi yenzululwazi kodwa isekelwe ukuthingaza ngqiqweni-ngqangi aseByzantium Umbhalo Efunyenweyo. Loo imodeli yokusebenza asinto nesayensi kuphela kodwa kwaphela lonto kuba ngoyaba ubungqina yeBhayibhile ngaye.
Ukuba amaKristu akholelwa ukuba ilizwi likaThixo iyaphuma ize igcinwe kwafuneka ukwenza ukhetho, njengoko wenza ukuba umbhalo wokuqala wesiGrike, nezithe kule mihla FNns amelweyo umbandela ngqangi ezihlangeneyo, ie okubhaliweyo yaseByzantium ngoko fck nokuqhubekeka Yombhalo Efunyenweyo. Kodwa ke ngelishwa, okubhaliweyo omtsha ezisisiseko, nazo zonke iimpazamo zayo ephikisanayo yaba isisekelo phantse kuzo zonke iinguqulelo Swedish ngexesha-1900 nowama-2000 ubudala, ngaphandle ezimbini. Izibonda uhlaziyo of Karl XII Bible 1923 Ke, bobabini esekelwe Umbhalo Efunyenweyo. Kuphela kwiTestamente Entsha ekhathaza utshintsho ekufutshane neendawo 3300! Kwabo bafuna ukwazi ngakumbi, sincoma wayetyelele website, bibel.se , apho kunandipha iividiyo kunye namanqaku amaninzi kunye neengxoxo.
Bo Hagstedt, uSihlalo
Bona amacandelo adlulileyo:
Bible - An itekisi engeyiyo esisiseko - inxalenye 1 ka-5
Bible - An itekisi engeyiyo esisiseko - part 2 5
Bible - An itekisi engeyiyo esisiseko - inxalenye 3 ka-5
Bible - An itekisi engeyiyo esisiseko - okuyingxenye 4 ka-5
Bible - An itekisi engeyiyo esisiseko - inxalenye 5 ka-5
website neNguquko leBhayibhile: www.bibel.se
NeNguquko Bible - Old Testament
Ke - New Testament
Ndayithenga ke Funda | apg29
UBruce M. Metzger, umbhalo iTestamente Entsha, Yinto iProtokholi, Urhwaphilizo Restoration, ushicilelo lwe-4, Oxford University Press ngo-1968.
UBruce M. Metzger, A Commentary Umbhalo kwi Greek New Testament, upapasho lwesi-2, Deutsche Bibelesellschaft / Bible Society German, Stuttgart, ushicilelo 8. Ngo-2007.
John William Burgon, Le Uhlaziyo Revised, ushicilelo yesibini, uDean Burgon Society Press, New Jersey, ngowe-2000.
JA Moorman, Ekuqaleni Imibhalo, Ootata iCawa, kunye Version abagunyazisiweyo, IBhayibhile for Namhlanje Press, New Jersey, 2005. Moorman liye laqulunqa FNns ubungqina emidala nkqu ucaphula lo Fathers Church. Le mithombo uye wasebenzisa na uhlelo Tischendorfs yesibhozo leyo, Nestle-Aland version 26, i-United Bible uhlelo wesithathu ngo-1975, iimaphu-ngqangi kwisicatshulwa zeTestamente eNtsha ngu Kurt noBarbara Aland, CE Leggs iintlelo ze uMateyu noMarko, uphindo eziliqela ethathwe von Soden, Hodges kunye Farstad, i Aland isishwankathelo zeVangeli Hoskier kwiSityhilelo.
Matthew Black, Commentary Peake ngayo eBhayibhileni, Revised Edition 1962nd
UBruce M. Metzger, The New Testament, Background layo, Growth, kunye Content, Abingdon Press, 1965th
TC Skeat, The iCodex Sinaiticus I-Codex Alexandrinus, London, British Museum ngo-1963.
Ingxelo yonyaka Swedish Bible Society, imizuzu-Aprili 21 ngo-1886.
Vecka 34, torsdag 22 augusti 2019 kl. 00:57